Faka imibala esobala ezithombeni - Geofumadas
Sebenzisa imibala ebonakalayo ezithombeni
Novemba, 2009 I-GvSIG, Microstation-Bentley
Izithombe eziningi baye baqedwa kusuka kumapholigoni, kepha ukwenza kanjalo akuzange kusethe umbala ongemuva obala futhi kubonakala kumnyama ocasulayo. Noma kwezinye izimo, sifuna uhla lwemibala lungabonakali; Ake sibone ukuthi ungakwenza kanjani:
Ngisebenzisa inguquko ye-1.9, ukuthi ekugcineni ubuhlanya bokulanda buphelile, futhi kungakapheli nemizuzu engamashumi amabili buyehla. Ngendlela, bheka indawo yokubamba esephaneli elingakwesobunxele, ngesitayela se- qgis.
Ukuze ungeze obala emfanekisweni, okulandelayo kwenziwa:
Inkinobho yangakwesokudla kokungqimba, esihlalweni sohlangothi, esikukhethayo izindawo ze-raster.
Khona-ke kuphaneli elandisiwe, sikhetha ithebhu obala, bese wenza kusebenze ibhokisi lokuhlola
Kuyadingeka ukwazi ukuhlanganiswa kombala we-rgb, kulokhu ngifuna ukususa okumnyama, inhlanganisela kulula: 0,0,0. Ngakho-ke siyayengeza, okwamanje umnyama ubonakala ngokusobala.
Uma ungasazi ikhodi ye-rgb, ungayikhetha kusuka esikrinini ngezinye izinhlelo zamahhala ezihambahamba, njenge-Visual Color Picker, ukunikeza isibonelo.
Ukuze ulondoloze izinguquko esicindezelayo yamukela
Imibala engaphezulu ingezwa, nakuba ingabe ingalimazi lezo izinguqulo zesikhathi esizayo gvSIG izokwengeza umkhethi wombala owuthatha ngokuchofoza esibukweni.
Ku umphathi we-raster, sikhetha isithombe ngenkinobho efanele, bese izilungiselelo zokunamathiselwe.
Sihlola ibhokisi lokuhlola Ukungafihli
Bese sikhetha umbala okulindelwe obala.
Bese sicindezela inkinobho Faka isicelo
Ups! ungakwazi kuphela ukukhetha isimo esisodwa nesinye sokuveza konke okunye.
I-GvSIG OS QGIS
Thumela Previous«Langaphambilini Thenga iNintendo DS Lite eSpain
Post Next gvSIG: Amathuluzi we-21 CADOkulandelayo »